Dooktar Akliiluun gita isaanii Taanzaaniyaa waliin mari’atan – Fana Broadcasting Corporate
Dooktar Akliiluun gita isaanii Taanzaaniyaa waliin mari’atan
Finfinnee, Onkololeessa 28, 2012 (FBC) – Ministirri Deettaan Ministira Dhimma Alaa FDRI Dooktar Akliiluu H/Mikaa’eel itti aanaa Ministira Dhimma Alaa Taanzaaniyaa Daamaas Di Niduumbaaroo waliin Taanzaaniyaa Magaalaa Daaresalaamitti dhimma waloo fi Idila addunyaa irratti mari’ataniiru.
Walitti dhufeenya biyyoota lamaan sadarkaa olaanaatti ceesisuuf daldala, Tuuriizimii, Invastimantii fi walitti hidhamiinsa biroo irratti xiyyeeffachuun ni hojjetama jedhaniiru Dooktara Akliiluun.
Lammiilee Ityoophiyaa Taanzaaniyaatti mana hidhaa keessa jiran gara biyyaa deebisuuf deeggarsa mootummaan biyyaattii taasisaa jiru galateeffataniiru.
Lammilee Ityoophiyaa ammallee mana hidhaatti hafan hatattammaan baasuuf mootummaan kutannoon kan hojjetu ta’uu gita isaaniif ibsaniiru.
Itti aanaan Ministira Dhimma Alaa Taanzaaniyaa Daamaas Di Niduumbaaroos gama isaaniin walitti dhufeenyaa biyyoota lamaanii kan bara dheeraa ta’uu ibsuun, mootummaan isaanii mootummaa Ityoophiyaa waliin waa hundi irratti walitti dhiyyeenyaan kan hojjetu akka eeraniiru.
Walitti dhufeenyi kunis gara sadarkaa caaluutti ce’uuu akka danda’u abdii isaanii ibsaniiru.
Obbo Gadduun gita isaanii Cheek Riipabiliik waliin mari’atan
Eebbifamtoota Yuunvarsitii kuma 5 ol gara hojiitti bobbaasuuf ta’uu Waajjiri Prees…
Ministeerri Galiiwwanii baatii 4 darbanitti galii Birrii biil. 90 ol walitti qabuu…
Kooriyaan kibbaa Lammiilee Ityoophiyaa Kooriyaaf duulaniif…
Baangilaadeeshitti balaa baabuuraa qaqqabeen lubbuun namoota…